'Kudanwa Kwebasa' Kunowana Spooky Netsva 'Iyo Inotyisa' Chiitiko uye Nyowani Zombies Mode - iHorror
musha Horror Varaidzo Nhau 'Kudevedzwa Kwebasa' Inowana Spooky Netsva 'Iyo Inotyisa' Chiitiko uye Nyowani Zombies Mode
'Kudevedzwa Kwebasa' Inowana Spooky Netsva 'Iyo Inotyisa' Chiitiko uye Nyowani Zombies Mode
'Kudanwa Kwebasa' Kwave Kuva tsika yeHalloween
by Trey Hilburn III October 9, 2021 379 maonero
Halloween izere netsika. Iwe unoziva, izvo zvidiki zvinhu zvaunoita iwe kuti uzviise iwe pachako mukati memweya weHalloween. Imwe yeaya ave Kudanwa kweDuty's gore negore chiitiko cheHalloween. Gore rakapera, yakaratidza rima rakavhurika-nyika nzvimbo iyo yaive neZombies uye zvipoko zvichimhanya kuburikidza nazvo, kuwedzera kune vamwe vatambi vari kukupfura iwe.
Kubata kweVerdansk iri kudzoka ku Kudevedzwa pabasa uye isu hatigone kumirira kuti titange kupinda munyika ino inoparadza.
Pamwe pamwe nechiitiko cheHalloween, ndiko kuwedzerwa kwematehwe maviri matsva. Gore rino tiri kugamuchira a Donnie Darko ganda uye Ghostface kubva Danidzira. Mwaka wadarika, isu takave naLeatherface naBilly the Puppet.
Pamwe na Kubata kweVerdansk. Iko zvakare kune inoshamisa inonakidza nyowani Zombies modhi. Ichi chitsauko chekupedzisira cheZombies ngano. Izvi zvinotora zvinhu kune yakavhurika nyika mishoni yakavakirwa zombie chiito icho isu takaunzwa kune gore rapfuura, zvisinei izvi zvinowedzera matsva makanika uye zvombo kune iyo mhondi inoita chiitiko chakakura.
Ini ndinonyatso kuchera kuwedzera kweanotyisa mifananidzo kumutambo. Ganda rega rega, rinouya nechombo chavo chakatarwa chinoenderana nefirimu ravo. Semuenzaniso, Leatherface akauya neLMG yaitaridzika senge Sawyer yemhuri chainsaw kubva yekutanga Texas Chainsaw Massacre.
Kana iwe ukasaina kusaina izvozvi, unogona kutarisa zvese zvakanaka uye uzviise mumweya weHalloween sezvo uine vamwe vatambi muHaunted Verdansk.
Wakasvetukira mukati here? Iwe unofungei nezve chiitiko chegore rino? Regai tizive pane yedu Facebook uye Twitter chikamu chemashoko.